news नेपालयुएई मै अस्ताए पूर्व भलिबल खेलाडी दीपक !! हार्दिक श्रद्धाञ्जली - news नेपाल
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार १९:५३
रोल्पा — पूर्व भलिबल खेलाडीसमेत रहेका रोल्पाका एक युवकको यूएईमा मृ’त्यु भएको छ । रोजगारका लागि तीन वर्षअघि यूएई पुगेका रोल्पा नगरपालिका–८ जंकोटका दीपक डांगीको गत शुक्रबार मृ’त्यु भएको परिवारले जनाएको छ। तीन वर्षअघि सु’रक्षा गा’र्डको रुपमा काम गर्न त्यहाँ पुगेका दीपक केही वर्ष नेपाली सेनामा आवद्ध रही राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी भइसकेका थिए ।
उनी सेनाको जागिर छाडेर खाडीमा आकर्षक मानिएको सु’रक्षा गा’र्डको काम गर्न पुगेका थिए । मृ’त्युको कारणबारे ठोस जानकारी नपाइएको परिवारले जनाएको छ । हाल लिबाङमा बसोबास गरिरहेका उनका छिमेकी लालबहादुर डांगीले मृ’त्युको अचानक खबर पाए पनि के कारणले मृ’त्यु भयो भन्ने जानकारी नपाइएको बताए । करिब ३३ वर्षीय उनका घरमा श्रीमती, छोराछोरी, बाआमा र भाइबहिनी छन् ।
करिब ६ फिट अग्ला उनलाई राम्रो खेलाडी ठानेर नेपाली सेनाले खेलाडीका रुपमा भर्ना गरेको थियो । तर यूएईको आकर्षक जागिर पाइने आशले उनी त्यहाँस्थित इजीएसएस कम्पनीमा सुर’क्षा गार्डको रुपमा काम गर्न पुगेका थिए ।
दीपक यूएईस्थित रोल्पाली युवाहरूले गठन गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाजमा पनि आवद्ध थिए । उक्त संस्थाले अप्ठ्यारो परेका युवाका लागि सहयोग गर्दैआएको बताइन्छ ।
दीपकको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै समाजका अध्यक्ष सन्दीप थापाले दुःखद् घटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समाजको पहलमा मृतकको शव नेपालस्थित घरमा पठाउने तयारी गरिएको दुबइमा रहेका समाजका प्रवक्ता शेरबहादुर डांगीले बताए । उनका अनुसार केही दिनअघि खाडीमै त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पाबाट रोजगारका लागि पुगेका अर्का एक युवाको ज्यान गएको थियो!
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ !
२०२६ फिफा विश्वकप : पहिलो पटक ४८ टिमको सहभागिता, १६ मैदानमा हुने
यी हुन् विश्वकप २०२२ खेल्ने ३२ राष्ट्र, फिफा अध्यक्षले दिए बधाई